Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka oo sheegay qaladaad badan inuu ku jiro miisaaniyada ay dhawaan soo gudbisay wasaaradda maaliyadda | RBC Radio
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka oo sheegay qaladaad badan inuu ku jiro miisaaniyada ay dhawaan soo gudbisay wasaaradda maaliyadda
Muqdisho (RBC Radio) Miisaaniyada lixda bilood ee ay dowladda federaalka ku shaqeyn doonta ayaa xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka waxaa ay sheegeen qaladaad badan inuu ku jiro.
Xildibaannada ayaa si gaar ah farta ugu fiiqa dhaqaalaha ay dowladda dhexe siin doonto maamul-gobolleedyada dalka,waxaana lacagaha u qoran ay yihiin kuwa kala duwan.
Miisaaniyadda ay dowladda dhexe u qoon-deysay gobolka Banaadir iyo dowlad-gobolleedyada:-
Gobolka Banaadir oo ay dowladda dhexe ku shaqeyso: -7,000 000 (Todobo milyan oo doollar).
Puntland: -$4,675,000 (Afar milyan iyo todobo boqol iyo todobaatan iyo shan kun).
Jubbaland: – $2,695,000 (Labo milyan lix boqol iyo sagaashan iyo shankun).
Koonfurgalbeed: -$1,475,000 (Hal milyan afar boqol iyo todobaatan iyo shan kun).
Galmudug: – $1,475,000 (Hal milyan afar boqol iyo todobaatan iyo shan kun)
Hirshabeelle: -$700,000 (Todobo boqol oo kun).
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Ibbi , oo ka mid ah xildhibaannada dooda ka keenay misaaniyadda dowladda ee ay wasaaradda maaliyadda soo gudbisay ayaa sheegay in dowladda aysan si cadaalad ah wax ugu qeybin dowlad-gobolleedyada dalka,isagoo marka tilmaamay in maamul-gobolleed deked leh oo dhaqaale fiican soo gala ay u qoran tahay lacago badan, halka maamul goboleed aan dekedo laheyn ay u qoran tahay lacago yar.
“Maamul-gobolleeydada kuwo lacag badan u qoran iyo kuwo lacag yar u qoran, waliba maamul goboleed deked leh oo dhaqaale fiican soo gala ayaa lacag badan u qoran, tusaale ahaan Koofur-galbeed waa meesha ugu bulshada badan tahay dalka oo dhan, waxaa ku nool 4 milyan oo ruux, hadana waxaa la siinaa hal milyan oo aan badda u shaqeyn, halka afar milyan la siinayo meelihii daqliga yaalay.” ayuu yiri xildhibaan Ibbi.
Xildhibaan ayaa sheegay inay ka sugayaan wasiirka maaliyadda inuu fasiraad dheerad ah ka bixiyo miisaaniyadda lixda bilood ee ay dowladda federaalka soo diyaarisay.
Wuxuu ku soo aaday hadalka ka soo baxay xildhibaannada qaarkood xilli ay maanta billaabatay ka doodista miisaaniyadda dowladda,iyado oo u jiro wal wal laga qabo miisaaniyada inay dhaliso doodo kulul iyo muran la xiriira qabka lugu saleeyay.